20 Websaydh Sawir Sawireed tayo sare leh | Abuurista khadka tooska ah
20 websaydh sawir qaadasho tayo sare leh oo tayo sare leh
Manuel Ramirez | | Sawirro, Khayraadka
Maaddaama aan haddaba ku jirno Kirismaska, waa maxay sida ugu wanaagsan ee dib looga soo celin karo degellada internetka tayo sare leh sawir furan si aad awoodid u isticmaal mashaariicdaada kala duwan iyo shaqooyinkaaga.
Markan waxaan la imid 20 degellada cusub sida a xaadir Christmas oo aad ka heli karto ku dhowaad mowduuc kasta oo suuragal ah. Xaqiiqdu waxay tahay in boodhadh aad iyo aad u tiro badani ay la muuqdaan sawir qaadayaasha kuwaas oo ku wadaaga sawirradooda qaabab waaweyn iyo tayo wanaagsan.
3 Sawir Kasta oo Kayd ah
6 Dhagax dhagaxa
10 Finda. Sawir
12 Sawiro Hantidhowr
13 Barta Sawirka Sawirka
14 Ku kaydi Sawirro bilaash ah
15 Sawir weyn
19 sawirka stok
20 Snaps dhab ah
Morguefile wuxuu leeyahay keyd ka badan 330 kun oo sawir qaraar sare oo loo isticmaali karo bilaash. Waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada suurtogalka ah dhammaan noocyada nashqadeeyayaasha iyo sawir qaadayaasha.
Bilaash u ah isticmaalka ganacsiga inkasta oo u tiirsanaanta abuureha la qadarin doono, Raumrot wuxuu leeyahay sawirro yaab leh oo leh repertoire 521 sawir wadarta.
Sawir Kasta oo Kayd ah
Un mashiinka raadinta sawirka oo waliba waxay leedahay uruurin ballaaran oo sawirro ah oo ay ku jiraan in ka badan 24 milyan oo leh is-dhexgal si habeysan loo abaabulay oo sahal loo maro.
Iyada oo in kabadan 300 oo sawirro bilaash ah, vectors iyo sawirro Pixabay waa font ku dhowaad aan dhamaadka lahayn dhammaan noocyada sawirrada. Waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso sidii isticmaale si aad u soo dejiso cabbirka xallinta sare.
Splashbase waxay leedahay a sawiro badan oo sawiro laga helay ilo kala duwan oo waxay ku tusaysaa iyaga hab aad u nadiif ah oo is dhexgal kaamil ah.
Websaydh kale oo xiiso leh oo leh tayo sare oo sawirro furan ah. Diiwaangelinta waxaad ku heli doontaa sawirro cusub toddobaad kasta.
Sawirro xallin sare leh maalin kasta wixii adeeg ah, ha ahaadeen kuwa ganacsi ama kuwa shaqsiyadeed. Looma baahna sifo.
Iyada oo leh liis weyn Jeeshoots ayaa leh doorashada aaladaha mobilada, markaa haddii aad u baahan tahay sawirro noocan ah, degel websaydh ah oo loogu talagalay.
Kaamiro sawirro ah tus waqtiga la marayo xilliyada kala duwan sanadka. Qabsashada quruxda badan ee aan cidna uga tagaynin danayn.
Finda.Photo wuxuu leeyahay a hab xiiso leh oo sawirro looga helo websaydhkaaga iyada oo loo marayo isticmaalka midabada, ama xitaa xulasho wanaagsan oo qaybaha ah. Ku muuji reer magaal boggan wanaagsan.
Marka laga reebo sawirada bilaashka ah ee warshad weyn, casharro Photoshop iyo qaabab ayaa sidoo kale la bixiyaa. Iyadoo Sawirro 51000Ha ku dhibin mid ka mid ah xayeysiinta ay ka bilaabayaan boggooda.
Hadaad raadiso sawir furan oo leh astaanta Apple tani waxay noqon doontaa degelka aad ugu jeceshahay. In kasta oo ay haa tahay, waxay leeyihiin doorbid wax kasta oo qayb ka ah xafiiska.
Barta Sawirka Sawirka
Sawir qaade ayaa dhamaan sawiradiisa ka tuuraya degelkan adeeg ganacsi ama bilaash. Ku dar 20 bil kasta ka soo aruuriyay.
Ku kaydi Sawirro bilaash ah
Degel leh sawirro fara badan oo lagu dalbaday qayb ahaan iyo taas oo ay tahay inaad iska diiwaangeliso si aad u hesho soo dejinta. La mid ah aqoonsiyada Facebook. Mudan.
Sawir weyn wuxuu ahaa laga soo bilaabo 2000 ku siinta sawirro qaraar sare bilaash, ama ganacsi ama adeegsi shaqsiyeed.
Cupcake wuxuu leeyahay sawir qaade Jonas Nilsson Lee oo leh qaar sawiro qurux badan oo leh mawduucyo kala duwan. Lama huraan.
Sawirro tayo sare leh oo ay keeneen saddex sawirqaade oo Dutch ah. Dhammaan noocyada mawduucyada oo leh muuqaal muuqaal ah oo aad u wanaagsan sawir kasta.
El shaqada naqshadeeyaha webka Karolina Grabowski. Ilo aad ufiican sawirada qaraarka buuxa oo loo adeegsan karo ganacsi ahaan.
Diiwaangelinta waad awoodi kartaa marin u hel 10 sawir oo qaraar sare ah oo bilaash ah 20kii maalmoodba mar. Waxaad sidoo kale kala soo bixi kartaa dhamaan sawirada aad ka rabto shabakada lafteeda.
Snaps dhab ah
Valenti Dri, sawir qaade iyo abuuraha Caano Dhab ah, ayaa ku qaadi doona emayl u soo dir 5 sawir oo tayo sare leh oo bilaash ah toddobaad kasta. Waqtiga aad kuxirantahay emaylkaaga, waxaad gali kartaa soo dejinta xirmada ugu dambeysay. Tayada aan la aamini karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » 20 websaydh sawir qaadasho tayo sare leh oo tayo sare leh
Joan Albert dijo
Subax wanaagsan, waxaan samaynaynaa degel waxaana jeclaan lahayn inaan dhigno xoogaa sawirro ah oo ka muuqda websaydhada aad halkan ku xustay, su'aashu waxay tahay haddii ay iyagu leeyihiin xuquuqda daabacaadda ama aan xusno ilaha shabakadda. Mahadsanid
Jawaab Joan Albert
Meel geodesic ah oo kaliya laga sameeyay wallpaper
10 ilaha naqshadeynta bilaashka ah ee salaantaada kirismaska